Chromium BSU: lalao sambon-danitra toy ny arcade | Ubunlog
Raha tia lalao arcade ianao dia mety hahaliana anao ity lohateny ity. Chromium BSU dia lalao video karazana arcade, fomban'ny shooter mitsangana miaraka amin'ny sambon-danitra. Ity dia lalao video iray izay mifototra amin'ny lozisialy loharano malalaka sy misokatra manana fahazoan-dàlana avy amin'ny fahazoan-dàlana Clarified Artistic Licence.
Ity lalao ity dia mifototra amin'ny haingam-pandeha sy ny fomba fitifirana arcade, Chromium BSU dia birao amin'ny fiteny fandaharana miaraka amin'ny C ++ ary mampiasa ny tranomboky OpenGL ho an'ny sary ary OpenAL ho an'ny vokam-peo. Chromium BSU dia azo apetraka ao amin'ny Linux, Windows, iPhone, PSP, Mac ary kinova UNIX isan-karazany.
1 Momba ny Chromium BSU
3 Ahoana ny fametrahana Chromium BSU amin'ny Ubuntu sy ny derivatives?
Momba ny Chromium BSU
Amin'ity lalao ity, ianao no kapitenin'ny sambo mpitondra entana mitondra ny anarana hoe "Chromium BSU" ary ianao no tompon'andraikitra amin'ny fandefasana ny entana amin'ny miaramila eo amin'ny laharana voalohany. Ny mpilalao dia manana andraikitra amin'ny fandefasana entana amin'ny miaramila eo amin'ny laharana voalohany.
Ny sambo mpitondra entana dia manana sambon-tafika mpiady robotika maromaro.. Ny asanao dia ny mampiasa ireo sambo ireo mba hahazoana antoka fa mahatratra ny laharana voalohany ny sambo mpitondra entana.
Ny mpilalao dia andrasana hitifitra ny sambon'ny fahavalo hahazoana antoka fa tsy hahatratra ny fanambanin'ny efijery ny sambo fahavalo. Ho an'ny sambo tsirairay izay mahatratra ny farany ambany amin'ny efijery dia hamoy ny ainy iray ny mpilalao.
Lafiny iray hafa amin'ny lalao izay manahirana ny mandresy ny tsy fisian'ny ammo. Ny ammo dia tsy maintsy ampiasaina amin'ny fomba mahomby mba handresena.
Ny bala azontsika jerena amin'ny lalao dia:
Fantatra amin'ny anarana hoe "pea shooter". Fa halahelo azy ireo ianao rehefa tsy eo izy ireo
Io fitaovam-piadiana io dia manapaka ny fahavalonao ary mandroso hatrany.
Ny fitaovam-piadianao mahery indrindra. Na izany aza, lany ny ammo plasma haingana.
Rehefa sahirana ny mpilalao iray handrava ny fahavalo dia manana safidy roa ny mpilalao. Afaka mifandona amin'ireo sambon'ny fahavalo izy ireo ary mety hanimba ny sambo sy ny tenany. Ny safidy hafa dia ny fanimbana tena, ka manapotika ireo fahavalo rehetra amin'ny efijery.
Ahoana ny fametrahana Chromium BSU amin'ny Ubuntu sy ny derivatives?
Raha te hametraka ity lalao ity amin'ny rafitrao ianao dia tsy maintsy manokatra terminal ianao ary manatanteraka ity baiko manaraka ityna, ilaina ny fananana ny repositories "Universe" ahafahana mametraka Chromium BSU.
Manokatra ny terminal izahay amin'ny Ctrl + Alt + T ary manatanteraka:
ihany koa manana toerana hametrahana Chromium BSU izahay miaraka amin'ny fanampian'ny Flatpak, noho izany dia ilaina ny mamela an'ity haitao ity hiasa ao amin'ny rafitray.
Raha tsy manana ianao dia azonao atao ny mampandeha azy amin'ny alàlan'ity fananganana ity amin'ny rafitrao miaraka amin'ity baiko ity:
Manavao ny lisitra izy ireo amin'ny:
Ary apetrak'izy ireo ny Flatpak miaraka amin'ny:
ankehitriny ilaina ny manampy ny tahiry Flatpak ho an'ny ekipanay, ity didy ity dia ataontsika:
Raha vantany vao vita izany dia ilaina ny mamerina ny solo-saintsika ireo solosaina mba hiantraikany.
Efa namerina ny rafitra, andao hametraka ny lalao miaraka amin'ny:
Tsy mila miandry fotsiny ireo fonosana ilaina halefa sy ny fametrahana azy eo amin'ny rafitray.
Ary raha efa nametraka ny lalao ianao dia azonao atao ny manavao azy amin'ity baiko ity:
Ny fomba fametrahana farany ananantsika dia amin'ny alàlan'ny fanangonana ny kaody loharano ny lalao ao amin'ny rafitray, azontsika atao ny mahazo azy amin'ny tranokala ofisialiny sy ao amin'ny fizarana fampidinana hitantsika ny rohy.
Azon'izy ireo atao ny mihazakazaka ny lalao avy ao amin'ny terminal miaraka amin'ny baiko:
Izy io koa dia misy tohan-kevitra vitsivitsy momba izany:
Si napetraka avy amin'ny Flatpak ny lalao dia alefaso amin'ny:
Ary vonona miaraka amin'izany, azonao atao ny manomboka milalao an'ity lohateny mahafinaritra ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Games » Chromium BSU - lalao sambon-danitra toy ny arcade
Ahoana ny fametrahana Nextcloud amin'ny Ubuntu 18.04 Bionic Beaver?
Wowcup: mampiseho ny lalao sy ny valin'ny FIFA 2018 ao amin'ny terminal